#Madaxwaynaha Masar El-Sissi ayaa La Wareegay Hogaanka Midowga Afrika | Get Latest News From Horn of Africa
#Madaxwaynaha Masar El-Sissi ayaa La Wareegay Hogaanka Midowga Afrika
By REPORTER On Feb 10, 2019 Last updated Mar 30, 2019
Abdel Fattah el-Sisi ayaa la filayaa inuu diiradda saaro dagaalka lagula jiro kooxaha hubeysan ee ka howlgala Afrika [Tiksa Negeri / Reuters]
Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah El-Sissi ayaa kala wareegay guddoomiyenimadda golaha Midowga Afrika ee 55-aad, Hogaamiye Paul Kagame furitaanka Shir Madaxeedka Midowga Afrika .
Intii lagu guda jiro inta uu xiligiisii xilka hayn doono, El-Sissi ayaa la filayaa in uu xoogga saaro dib-u-habeynta amniga iyo maaliyadda, laakiin ma jiro qorshe weyn oo lagu xoojinayo awoodaha badan ee Midowga Afrika.
Taa baddalkeeda, waxaa la filayaa in diiradda la saaro in lala dagaallamo soogalootinimada sharci la’aanta ah iyadoo Masar ay nafteeda ay tahay mid ku faneysa iney tusaale uu ah martigelinta qaxootiga.
Muddadii uu xukunka Qabtey madaxweyne Abdel Fattah al-Sisi ayaa Abuurey cabsi naxdinta leh ee xuquuqda aadanaha isaag jirdil iyo cabuurin uu geystey saxafadda iyo cid kaste oo lidk ku ah ama ka soo horjeeda dawladdiisa. Halka dhanka hoggaankiisa uu waddanku hoos u dhacay xuquuqda iyo xorriyadda qofka.
Shirka waxaa Ciinwaan Loga dhigay “Qaxootiga, Kuwa Dib ugu Noqonaaya Dalkooda iyo Dadka Gudaha Dalkooda Ku Barakacaya” oo lagu soo bandhigay xaalad ammaan ee ay ku sugaan yihiin.
#Waxaa i Niiyad Galiyey Modi, aktarada Sunny Deol oo ku biiray Xisbiga BJP; Lagana Yaabo in uu u tartamo Gurdaspur
#Yemen oo Bogaadisay Soomaalida Sidaa Ay usoo Dhaweeyen qaxootiga Yamaniyiinta
Ganacsi Xorta Ah
Aagga Ganacsiga Xorta Ah ee afka qalad lagu yirahdo ( CFTA ) ayey ansixiyeen Bishii Maarso 44 ka mid ah 55 ka mid ah dalalka xubinta ka ah. Haddii la ansixiyo, waxay noqon doontaa meesha ugu weyn ee ganacsiga Xorta ah tan iyo markii Ururka Caalamiga ah ee Ganacsiga la aasaasay 1995.
The CFTA Waxay jeclaan lahayeen in canshuuraha laga reebo 90% boqolkiiba badeecadaha taas oo ay filayaan in ay kor u qaadi karto ganacsiga gudaha ee qaaradda 52% boqolkiiba saddex sano gudahood, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay.
Goobta ganacsiga Xorta ah ayaa dhaqan gali doonta marka la ansixiyo 22 ka mid ah dawladaha saxiixay. Laga soo bilaabo bishan February, 19 dawladood ayaa ansixiyey heshiiska.
Nigeria waxaay ka mid tahay awooddaha dhaqaale ee qaaradda ee aan ku jiriin aan ku jiriin CFTA , iyada oo madaxweynaha Muhammadu Buhari uu ka welwelsan yahay in uu waxyeeleynayo ganacsiga dalkiisa Nigeria.
Walaacyada xuquuqda aadanaha
Kooxaha xuquuqda aadanaha, oo ay ku jiraan “Amnesty International”, ayaa walaac ka muujiyay in guddoomiyenimadda Dawladda Masar ee Midowga Afrika uu wiiqi karo hababka xuquuqda aadanaha ee Midowga Afrika u yaal.
“Maamulkisa xukunka adag ee madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi ayaa abuuray cabsi weyn oo ku aaddan xuquuqda aadanaha. Taas sababtey in uu hoos u dhac ku yimido xuquuqda iyo xorriyaad qowlka, “ayuu yidhi Najia Bounaim, oo ah agaasimaha hay’adda Xuquqda Addanaha ee Waqooyiga Afrika.
“Waxaa jira cabsi laga qabo oo ku saabsan saameynta uu ku yeelan karo madaxtinimadeena ku aaddan madax-bannaanida nidaamka xuquuqda aadanaha ee gobolka iyo mustaqbalkooda sidaa mustaqbalka bulshada rayidka ah,” ayay tiri.
“Wadamada xubnaha ka ah Midawga Afrika waa in ay hubiyaan in Masar, oo ah madaxa siyaasadda ee ururka 2019, ay ilaaliyaan qiyamka iyo mabaa’diida Midowga Afrika, oo ay ka mid yihiin ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo dadka.”
#Somalia president lands in Eritrea after Egypt trip
Apr 24, 2019 12,566
#Somalia: Governor survives bomb that…
Apr 24, 2019 136,976
#Xili Bulshaddii ku nooleyd Ay Cadaalad…
Apr 24, 2019 98,242
#Xildhibaan Mar kale Dul Istagey Sababta…
Apr 24, 2019 19,651
Prev Next 1 of 3,466